သင်၏ Porn Session သည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းစိတ်ပညာရှင်က၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုရှင်းပြသည်။ လုကာဗူ, ပါရဂူဘွဲ့ (2019) - သင့် ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
သင်၏ Porn Session သည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းစိတ်ပညာရှင်က၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုရှင်းပြသည်။ လုကာဗူ, PhD (2019)
By သူ Mike Huynh
porn ၏ 5,517,000,000 နာရီတဦးတည်း site ပေါ်တွင် ... တစ်ဦးတည်း 2018 အတွက်ကျွမ်းလောင်ခဲ့သည်။
ယခုသင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မယ်မတိုင်မီသင်တစ်ဦးပစ်ချမပေးခဲ့ပါဘူးလျှင်။ porn စွဲဒီနေ့ရဲ့ယောက်ျားအကြားကြီးထွားလာသောပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးမှာကသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသင့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားသံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့်အတူ, သင့်ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။
သင် stats ယုံကြည်လျှင်၎င်းသည်လည်းတီထွင်ခဲ့တယ်ပါပဲ။ မှတစ်ဦး 2017 အစီရင်ခံစာအရ Huffington Post က, porn sites များတစ်လလျှင်ပေါင်းစပ် Netflix, အမေဇုန်နှင့် Twitter ထက်ပိုမိုပုံမှန်အသွားအလာလက်ခံရရှိသည်။ ငါတို့သည်ဖြုန်းနာရီ porn ကိုကြည့်? Pornhub Analytics မှ သူတို့ရဲ့ site ကိုမှဧည့်သည်များအဘို့တစ်ဦးတည်း 5,517,000,000 အတွက် 2018 နာရီမှာ pegged ။ တစ်နည်းကတိုးပွားလာပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်တော်လေ့လာစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ porn စွဲ Channel ကို 10 ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာမန်နေဂျာ Samantha ဂြနျေးအတူ။ ဤအချိန်ကျွန်တော်စိတ်ပညာရှင်များ၏အကူအညီဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်နည်း (ဆိုင်းဘုတ်များ, အစပျိုးခြင်းနှင့်အကျိုးဆက်များ) ယူပြီးဖွင့် လုကာ Vu အဘယ်သူသည်ညစ်ညမ်းနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအတွက်အထူးပြုသည်။
"ဒီကိုယနေ့လူငယ်များနှင့်မနက်ဖြန်ရဲ့ယောက်ျား Self-စီမံခန့်ခွဲ virtual reality porn လျင်မြန်စွာပိုပြီးသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်လာကြောင်းပေးထားသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုဖို့သင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ "
အဘယ်ကြောင့် Porn စွဲတစ်ဦးကရီးရဲလ် Issue Is
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, porn စွဲအင်တာနက်များ၏ by-product ဖြစ်နှင့်သဘာဝရိုက်အရာကိုဆက်ခံမဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ vu ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအတွက်တိုးလာမှုကြောင့်နည်းပညာကိုမှအများစုကပြောပါတယ်။
"၎င်း၏အခမဲ့ကြောင့်အလွယ်တကူဖွင့်ခြင်းနှင့် '' အဘယ်သူမျှမသင်အသုံးပြုနေသည်သိတယ် '' ၏မြေတပြင်လုံးအယူအဆရှိတယ်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ ဤသည်အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်းများနှင့်မောက်ကလစ်နှိပ်နှင့်အတူစူးစမ်းဖို့လွတ်လပ်မှုကိုဤမျှလောက်များစွာသောလူတို့သညျ arousal များအတွက် porn အပေါ်မှီခိုဖြစ်လာကြပါပြီရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
"ဟုအဆိုပါ 1990s နှင့်အစောပိုင်း 2000s အတွက် Porn ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျရရှိရန်ခက်ခဲခဲ့ကြသည် - သင်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုစတိုးဆိုင်ကိုသွားဒါမှမဟုတ် DVD ကိုဝယ်ယူရန်ရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ် - ။ နှင့်ဤသူသည်သင်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းအဘို့သင့်ရမ္မက်စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတယ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို"
ဤသည်နေ့ရက်ကာလကနည်းပညာလူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းအရာနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးလမ်းကိုပြောင်းလဲခဲ့ပုံကိုကြည့်ရှုရန်သိသာပေမယ် Vu မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတခုတခုအပေါ်မှာပင်ပိုကြီးကပျြအရှိမယ့်ကပြောပါတယ်။
"ယနေ့ငါ၏လူငယ်ထင်နှင့်မနက်ဖြန်ရဲ့ယောက်ျား Self-စီမံခန့်ခွဲ virtual reality (VR) porn လျင်မြန်စွာပိုပြီးသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်လာကြောင်းပေးထားသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုဖို့သင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ "
သင် Porn စွဲနေကိုဘယ်လိုသိပါသလား?
vu '' စွဲ '' မကြာခဏအများပြည်သူနှင့်စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးမှကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာဆိုလိုနိုငျသောကရှင်းပြသည်။ "တစ်ဦးစွဲရောဂါခံရရန်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ပညာရှင်သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိတ်ကျန်းမာရေးကတရားဝင်အကဲဖြတ်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာနေဆဲသုတေသနတစ်ခုတက်ကြွဧရိယာကြောင့်လည်းအငြင်းပွားဖွယ်ပါပဲ။ "
သင်မှန်မှန်ရည်ရွယ်ထက်ပိုမိုညစ်ညမ်း (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြင်းထန်သော porn) ကိုသုံး
သငျသညျအနှုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ် porn ကိုသုံးပါ
သငျသညျဤအရာအနည်းငယ်မှ '' ဟုတ်ကဲ့ '' ပြန်ဖြေခဲ့လျှင်, တကစိတ်ကျန်းမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စကားပြောရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာခက်ခဲ Porn စွဲထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လား?
အဲဒါကို 'ရပ်တန့်' 'ကိုနှိပ်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောင်နှင့်သင့် screen ကိုပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော အတော်လေးမဟုတ်ပါဘူး။
"Porn တစ် supernormal လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလူသားမြားသ evolutionarily အဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်ဘယ်အရာကိုထက်တန်ခိုးကြီးတဲ့တုံ့ပြန်မှု elicits တဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုပါပဲ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ primal ရမ္မက်ရန်၎င်း၏ချိတ်ဆက်မှု၏အဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်များကိုစုဆောင်းနှင့်အသုံးပြုမှုလှုံ့ဆျော, "Vu ရှင်းပြသည်။
ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလ porn ကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာတောင်ကျောအဟောင်းအလေ့အထသို့ချော်ဖို့ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကအခမဲ့အဆုံးမဲ့နှင့် On-demand ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအကြောင်းပြချက် porn လောင်ဖို့ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူများသည်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အတွက်လုပ်ကြဖို့ခွင့်ပြုနှင့်တက်ပေးခြင်း၏စိတ်ကူးကိုမကြာခဏထို့ကြောင့်တော်တော်ခက်ခဲသည်။
သင်ကတည်းကကုသမှုမရှိဘူးဒါဟာ Leave အကယ်. ဘာဖြစ်မည်နည်း
တည်းကကုသမှုမရှိဘူး left ရဲ့မည်သည့်ပြဿနာလိုပဲကပိုဆိုးရနိုင်သည်။ သူတို့တစ်တွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတဦးတည်းမှုအတွက်စစ်မှန်သော connection ကိုဖြည့်စွက်နေတဲ့အဖြစ်အလွန်အကျွံ porn ကို အသုံးပြု. သူများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးလျစ်လျူရှုထားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်လျစ်လျူရှုပြီးတော့ဆက်ဆံရေးဟာအံဝင်ခွင်ကျသို့မဟုတ်ကွာရှင်းစေပါတယ်။
ဤသည်နေ့ရက်ကာလသည်အလွန်မှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်ညစ်ညမ်းစွဲဘို့ပစ်ခတ်တဲ့ - ထိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမျက်နှာစာတွင်, Vu သင် "စုံလငျ" porn ကလစ်၏ search အတွက်မရေမတွက်နိုင်သောနာရီနှင့်ညဖြုန်းနေလျှင်သင့်ရဲ့အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခြားဘက်ခြမ်းအလွန်အကျွံ porn အသုံးပြုမှုတချို့ထူးခြားသောအကျိုးဆက်များရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြို့သောအဘို့, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားပြောင်းပေးပါ။ ဒါဟာသေချာပေါက်မကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်မကောင်းတဲ့နိုင်ပါတယ်။ vu သင်သည်တရားမဝင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်အကြောင်း, သင့်ရဲ့တန်ဖိုးများကိုသို့မဟုတ်ပိုဆိုးနှင့်အတူ align ပါဘူးကြောင့်ညစ်ညမ်းထုတ်ရှာကြံကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ကပြောပါတယ်။
Porn စွဲခုနှစ်တွင်အများစုမှာအန္တရာယ် Trends
porn စွဲ၏အရှိဆုံးစိုးရိမ်စရာခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုမှာအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကိုဖို့ငျးကှာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏ Erectile အလုပ်မဖြစ်သွေးဆောင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအဖြစ်ရည်ညွှန်းတဲ့အခွအေနေ - လူနာကသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆော်ခြင်းခံရအတူအခက်အခဲတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။
"တစ်ခါတလေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုစိုးရိမ်စိတ်နဲ့သူတို့ကျွမ်းလောင်ဖူးတဲ့ porn နှင့်အတူအဆက်မပြတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေထိုသို့ရန်လိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနည်းစနစ်ကနေနာတာရှည် desensitisation ကြောင့်ဖွင့် - ။ '' သေမင်းကိုချုပ်ကိုင်ထား syndrome ရောဂါ '' အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသည့်လူသိများ "
porn အလေ့အထ '' မညီကြောင်း '' ဘာသာရပ်များနှင့်အတူလိင်၏ arousal ဖော်စပ်သို့မြင့်လာသည့်အခါအများဆုံးကိုရည်မှတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ "တချို့ clients များသူတို့ကကျွမ်းလောင်တော့အဘယ်အရာပေါ်မှာထင်ဟပ်ပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုမှာရွံရှာခြင်းနှင့်ဒုက္ခရောက်နေကြသည်။ "
porn စွဲကနေပြန်လည်နာလန်ထူ Vu သည်နှင့်အညီအမြဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ "ဦးနှောက်ပုံစံများပြောင်းလဲဖြစ်ကြပြီးသင်အမြဲဟောင်းအလေ့အထများကိုချိုးဖျက်နှင့်အသစ်နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းအလေ့အထများဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။
သူတို့ရဲ့ porn အလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်သူများသည်စားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ဤခြေလှမ်းများကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန် - ကနာရီအနည်းငယ်ထက်ကျော်လွန်နှငျ့သငျအလုပျမှာပါသို့မဟုတ်လပ်ချိန်ကာလအတွင်းကစတင်ကြည့်ရှုအထူးသဖြင့်ဆိုရင်
သင့်ရဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော် / စီမံခန့်ခွဲငွေပမာဏသည်အဘယ်အရာအကဲဖြတ်ရန်
သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတမင် Be - အချိန်မသတ်မှတ်လုံခြုံအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်နှင့်အနီရောင်အဘယ်အရာကိုသတ်မှတ်
သငျသညျကိုခုတ်လှဲရန်ကြိုးစားအဖြစ်ရမ္မက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် Accept နှင့်သင်ယူ - အကျိုးဆက်များကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ် porn အစားထိုးအားကစားသို့မဟုတ်အခြားဝါသနာများကဲ့သို့အာရုံပြံ့လှငျ့ကိုသုံးပါ